Ny renivohitry ny Nosy Solomon dia eo ambanin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina taorian'ny rotaka feno herisetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Nosy Solomon » Ny renivohitry ny Nosy Solomon dia eo ambanin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina taorian'ny rotaka feno herisetra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao farany momba ny Nosy Solomon • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nampidirina mihidy i Honiara rehefa nanandrana nanafika ny lapan'ny parlemanta ny mpanakorontana
Nitifitra baomba mandatsa-dranomaso ny polisy Honiara tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nandoro tranobe ary nandoro ny tobin'ny polisy teo akaikin'ny tranoben'ny parlemanta.
Nanambara ny manampahefana ao amin'ny governemantan'ny Nosy Solomon fa eo ambanin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ny renivohitr'i Honiara.
Napetraka mihidy ny renivohitry ny firenena nosy Pasifika taorian'ny nanandrana nanafika ny tranoben'ny parlemanta ny mpanakorontana mahery setra.
Araka ny Nosy SolomonNy mpitondra tenin'ny polisy dia nitifitra baomba mandatsa-dranomaso ireo mpanakorontana izay nandoro tranobe ary nandoro ny tobin'ny polisy teo akaikin'ny tranoben'ny parlemanta androany.
“Vahoaka be no niforona teo anoloan'ny parlemanta. Nokasain'izy ireo hametra-pialana ny praiminisitra – izany no vinavinan'ny besinimaro – saingy mbola eo am-panadihadiana ny antony. Ny zava-dehibe dia ny mpitandro filaminana izao no mifehy ny zava-misy ary tsy misy olona mivoaka an-dalambe”, hoy ny polisy ao Honiara.
Araka ny nambaran’ity manamboninahitra ity dia tsy nahafantatra ny fisian’ny ratra ny mpitandro filaminana tamin’io fotoana io.
Nampitandrina ireo teratany Aostraliana ao an-drenivohitr'i Solomons mba ho mailo ny tolotra toro-hevitra ofisialy Smart Traveler an'i Canberra.
“Mivoatra ny toe-draharaha Honiara miaraka amin'ny korontana sivily. Miangavy, mitandrema, mijanona amin'ny toerana misy anao raha azo antoka ny fanaovana izany ary ialao ny vahoaka, ”hoy izy.
Voalaza fa nisy andiana mpanao fihetsiketsehana nandeha tany Honiara tamin'ity herinandro ity avy any amin'ny nosy Malaita mifanila aminy.